Wasiirka Daakhiliga Somaliland oo Farriin culus u diray Axsaabta Tartamaysa | Somaliland.Org
Wasiirka Daakhiliga Somaliland oo Farriin culus u diray Axsaabta Tartamaysa
November 22, 2012	“Yaan shacbiga lagu gal-galan qofka soo baxdaana waa cida shacbigu soo doortaan, cid xukuumadi dooratay maaha”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraalle (Duur) ayaa axsaabta siyaasadda ugu baaqay inay codka dadweynaha kaga doonaan qaab nabad-gelyo ah doorashadda Goleyaasha deegaanka ee todobaadka dambe wadanka ka qabsoomaysa.
“Waxaan Axsaabta leeyahay Ummadda carab wanaagsan codadka kaga doona. Waxaad kaga doontaan waxaas iyo waxan ayaanu idiin qabanaynaa,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha gudaha oo maanta ka hadlayay shir uu xarunta wasaaradda Daakhiliga kula Yeeshay maamulka Gobolka Maroodi-jeex, ka degmada iyo Gudiyada nabad-gelyada ee magaaladda Hargeysa.
“Nabadda Somaliland halka ay maanta joogtana waxay u baahan tahay ka ambo-qaad ayay u baahan tahay laakiin haddii aan ku hanjabo oo aan idhaahdo nabadda ayaan duminayaa, haddii la I dooran waayo, taasi ma suurtoobayso,”ayuu intaasi ku daray Wasiir Duur.
Wasiirka Daakhiligu waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii ladhay “Markaa waxaan leeyahay Axsaabta siyaasadda dadweynaha nabad codkooda kaga doona. Waxaanu axsaabta kala shaqaynaynaa goobaha la iskugu yimaado (Fagaareyaasha), waxaana loo diyaarinayaa agabka ololaha doorashadda. Masuuliyiinta degmooyinkuna waxay xisbiyadda iyo ururadda u soo dhawaynayaan si isku mid ah.”
“Yaan shacbiga lagu gal-galan qofka soo baxdaana waa cida shacbigu soo doortaan. cid xukuumadi dooratay maaha, Urur xukuumadi wadato ma aha. Cidii shalay shacbigu doortay ayaa maanta xilka haysa,”ayuu hadalkiisii ku soo gunaanaday Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Maxamed Nuur Caraalle (Duur).
Hadalkan ayaa Wasiirku jawaab dad badan u ahaa qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiyada iyo ururadda siayasadda oo ku dooday inay ka walaacsan yihiin in xukuumaddu ay boobto cod bixinta doorashada deegaanka ee dalka ka dhacaysa 28-ka Bishan.
Previous PostHargeysa: Afar Qof Oo Dhaawacyo Culusi ka soo Gaadhay Baabuur Galay Mukhaaxi ShaahNext PostMurashax Iska Casilay Urur-siyaasadeedka DALSAN	Blog